ओर्लो गुड क्याम जेड - - एक विशिष्ट निगरानी क्यामेराको समीक्षा - स्मार्टमे
ORLLO क्यामसेट स्मार्ट। चार क्यामेराको साथ सेटहरूको समीक्षा
ओर्लो, ORLLO क्यामसेट स्मार्ट
यो ORLLO सेटमा एक छैन, दुई होइन, वा तीन क्यामेरा पनि छैन। केवल चार! थप रूपमा, यो एक रेकर्डर र एक मोबाइल अनुप्रयोग संग एक मोनिटर छ। हामीले यसको परीक्षण गर्नुपर्‍यो ...
Reolink Argus 2E - वायरलेस निगरानी
आर्गस २ ई, क्यामेराकन्फिगरगर्नुहोस्, होम क्यामेरा, ताररहित अनुगमन, पुन: लिंक गर्नुहोस्, Rolink Argus 2E, यसको आफ्नै सौर्य ऊर्जा आपूर्ति संग।
यो क्यामेराको यस प्रकारको मेरो पहिलो समीक्षा हो। हामी कुरा गर्दैछ रओलिink्क अर्गस २ ई, अर्थात् वायरलेस निगरानीको यसको आफ्नै विद्युत आपूर्तिको साथ। रियोलिंक आर्गस २ ई एक सेतो मिनीयन, सूट वा क्याप्सुलमा कोस्मानोउट जस्तो देखिने सानो वेबक्याम हो। त्यसो भए सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो ...
Xblitz s4। सस्तो कार DVR समीक्षा
क्यामेराकन्फिगरगर्नुहोस्, कार क्यामेरा, समीक्षा, Xblitz
समय आयो जब "बजेट" वेबक्यामको समीक्षा गर्न "आएको" थियो। इमान्दारीपूर्वक बोल्दै: मसँग यसको लागि ठूलो अपेक्षाहरू थिएन, तर प्रश्न उठ्यो: के म कसैलाई Xblitz s4 सिफारिश गर्दछु? के उपकरण PLN २०० भन्दा बढी मूल्यवान छ? ...
के तपाईंलाई घरको अगाडि क्यामेरा चाहिन्छ? कसरी नोबेल पुरस्कार पाउने रेकर्ड गर्न!
15 अक्टोबर 2020
क्यामेराकन्फिगरगर्नुहोस्, घोंसला, नोबेल
ठीक छ, तपाईले कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ ठीक होईन। मात्र जब एक साथी तपाईंलाई यसको बारेमा बताउन दौडन्छ। नेस्ट क्यामेराले यस्तो असामान्य स्थिति रेकर्ड गर्‍यो। तपाईं मध्यरातमा सुत्न सक्नुहुन्छ। यो २:१:2.15 हो। अचानक तपाईंले ढोकाको बेल सुन्नुभयो। पहिलो ...